Topnepalnews.com | किन हुन्छ विमानमा बम राखेको हल्ला ?
किन हुन्छ विमानमा बम राखेको हल्ला ?
Posted on: May 03, 2016 | views: 157
भारतको नयाँदिल्लीबाट १ सय ६२ यात्रु लिएर काठमाडौं आइरहेको जेट एयरवेजको जहाजलाई आइतबार त्रिभुवन विमानस्थल टावरले सोध्यो – तिम्रो जहाजमा बम ब्रेटको खबर आएको छ । उतै फर्किन्छौं कि यतै आउने ? ’ जेटका क्याप्टेनले जहाजलाई काठमाडौं अवतरण गराउनै सजिलो हुने बताएपछि धावनमार्ग क्लियर गराइयो ।
जेटमा बम रहेको अपुष्ट खबर कुनै अज्ञात व्यक्तिले नयाँदिल्लीस्थित उसकै कलसेन्टरमा नोट गराउँदा जहाज सिमरामाथिको आकासमा होल्डमा थियो । पछि जहाज अवतरण गराएर खानतलासी गर्दा हल्ला गरिएजस्तो केही पनि भेटिएन ।
विमानस्थलका प्रवक्ता भोलाप्रसाद गुरागाइँका अनुसार बेला बेला विश्वभर यस्ता हल्ला आइरहन्छन् । यिनमा ९० प्रतिशत हावादारी हुने गरेका छन् । कुनै बेला प्रतिस्पर्धी विमानले पनि आफ्नो बिजनेस बढाउन यस्तो हल्ला गर्ने गरेको पाइएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।